Cayaaraha Africa 2015 Group B - BBC News Somali
Cayaaraha Africa 2015 Group B
Cayaaro xiiso leh, ayaa xalay dhexmaray kooxaha Group-ka B. Labada kulanba barbarro ayay ku dhamaadeen, Dr Congo iyo Tunisia waxay ku kala baxeen 1-1, iyadoo Cape Verde iyo Zambia-na ay ku dhamaatay 0-0.
Waxaa Group-kan qaybta sideedda koox ee Quarter final-ka u gudbay Tunisia iyo DRC.
Tunisia dhibic kaliya ayay u baahnayd, halka Congo iyo Cape Verde ay rajadoodu isku xirnayn. Hadii Cape Verde iyo Congo ay labaduba badin lahaayeen, way soo wada bixi lahaayeen. Balse, Tunisia dhibicdii ay u baahnayd ayay heshay, iyadoo Congo ay ku badbaaday in Cape Verde iyo Zambia ay kala badin waayeen.
Group C- Caawa ayay cayaarayaan, Senegal waxay la dheelaysa Algeria, halka Koonfur Africa ay kulmayaan kooxda Ghana. Senegal ayaa 4 ku hogaaminaysa oo u baahan oo kaliya dhibic.Ghana iyo Algeria min sadex ayay leeyihiin, hadii ay barbarro noqdaan Ghana ayaa soo baxaysa hadiise Algeria ay ka badiso Senegal, Ghana waay u baahanaysaa in ay ka badiso Koonfur Africa si labadooda ay u soo baxaan
Habeen dambe ayaase cayaaro kuwii ugu xiisaha badnaa ay jiraan Waa Group D oo afarta koox ee ku jirtaa, horayna loogu tilmaamay group-ka dhimashada.
Ivory Coast iyo Cameroon ayaa kulmaya, Guinea iyo Mali-na way is arkayaan.
Cayaarahoodii hore min dhibic ayay ku dhamaadeen oo koox walba 2 dhibic ayay leedahay. Natiijadoodu waxay ku xiran tahay in koox walbaa sida ay u badiso. Hadii kale waxaa loo eegayaa sida ay hadda u kala horeeyay hadii barbarro ay noqdaan oo ah in Ivory Coast iyo Mali ay soo baxaan.
Muxuu yahay filimka Salman Khan ee khatarta dhaqaale keeni kara hadduu soo baxo?
Sheyga uu qof walba u baahan yahay ee sii dhimanaya